China yakajeka hombe / diki beaker 600ml 150ml 2000ml pyrex girazi beaker Kugadzira uye Fekitori | Huida
bvisa hombe / diki beaker 600ml 150ml 2000ml pyrex girazi beaker
Chigadzirwa Chigadzirwa: Beaker
1.Tall fomu uye yakaderera fomu
3. akapedza kudzidza
Zvinyorwa: Boro 3.3 girazi
Nguva Yekubhadhara: T / T, L / C, Western Union, Palpay
Mimwe: Anopa mukati memazuva mashanu kazhinji
Kuisa Port: Qingdao / Shanghai chiteshi kana kumusoro kune mutengi
Nguva yekuendesa: Mazuva 15-30 kusvika kune yakawanda yevatengi
Mabheaker anowanzo pedza kudzidza, kureva kuti, anoiswa mucherechedzo neine mitsara inoratidza vhoriyamu irimo.
Semuenzaniso, 250 ml beaker inogona kumakwa nemitsetse kuratidza 50, 100, 150, 200, uye 250 ml yevhoriyamu. Aya mamaki haana kuitirwa kuti uwane chiyero chaicho chevhoriyamu (rakapedza humburumbira kana hombodo yevolumetric chingave chiridzwa chakakodzera pabasa rakadai), asi fungidziro. Mazhinji mabheaker akarurama mukati me ~ 10%.
SiO2 Zvemukati > 80%
Kunetseka Point 520 ° C
Anonyorovesa Point 820 ° C
Chiedza Kufambisa (2mm) 0.92
Kwakavharwa nenyama Modulus 67KNmm-2
Tensile Simba 40-120Nmm-2
Girazi kushushikana Optical Coefficient 3.8 * 10-6mm2 / N
Kugadzira Kupisa (104dpas) 1220 ° C
Linear Coefficient yekuwedzera (20-300 ° C) 3.3 * 10-6K-1
Kuwedzera (20 ° C) 2.23gcm-1
Chaicho Kupisa 0.9jg-1K-1
Thermal Kuitisa 1.2Wm-1K-1
Kurwisa Hydrolytic (ISO 719) Bhuku 1
Kurwisa acid (ISO 185) Bhuku 1
Alkali Kuramba (ISO 695) Bhuku 2
Thermal Shock Nemishonga Rod6 * 30mm 300 ° C
Girazi reBorosilicate rine rakanakisa makemikari uye epanyama zvimiro. Mutsetse wekuwedzera cofficient wepuru girazi inogadzirwa nehydrolyzable iri 3.3 yezvikumbiro inoda yakanakisa kemikari kuramba uye kupisa kwemhepo (kusanganisira kupisa kwekushomeka kusagadzikana), pamwe neakakwira michina kugadzikana. Iyo chaiyo girazi remakemikari michina.
Kuvapo kweshipu kunoreva kuti mubiki haagoni kuva nechivharo. Nekudaro, painenge ichishandiswa, mabheki anogona kuvharwa negirazi rekutarisa kudzivirira kusvibiswa kana kurasikirwa kwezviri mukati, asi achibvumira kubuda nemumuromo. Neimwe nzira, beaker rinogona kunge rakavharwa nerimwe rakakura beaker rakamisikidzwa, kunyange girazi rekutarisa riri nani.
Kuisa mucherechedzo kwakasimba uye kunogona kushandiswa mukuyedzwa kwerabhoritari negirazi yakapedza humburumbira. Wide micheto uye tapered spout kuti nyore kuzadza uye kudira.
Izvo zviyero zvese zvinoyerwa neruoko, saka panogona kunge paine zvikanganiso. Ndokumbirawo utibate isu nezve chaiyo yekutakura.
Beaker fomu yakaderera Ine spout uye yakadhindwa kudzidza
Beaker akareba fomu Nespout uye akaprindwa kudzidza
Ruzivo diki rekuyedza
Bheaker rinoshandiswa semudziyo wekuita kugadzirisa mhinduro mukamuri yemukati kana pasi pekudziya, kuputsa chinhu uye huwandu hwakawanda hwechinhu.
1. Kana uchipisa bheaker, isa asbestos net kune zvakaenzana kupisa. Usapise zvakananga bheaker nemurazvo. Rusvingo rwekunze rwebeaker runoda kuomeswa kana rwopiswa.
2. Nekunyungudika, huwandu hwemvura haupfuure 1/3 yevhoriyamu, uye zvinodikanwa kumutsa netsvimbo yegirazi. Usabata pasi pekapu uye madziro emukombe apo girazi girazi riri kumutswa.
3. Kana uchishandiswa kupisa kwemvura, usapfuure 2/3 yevhoriyumu yebheaker, kazhinji 1/3 inokodzera.
4. Kana muchidziisa mishonga inoparadza, vharai pamusoro pemukombe pamukombe kudzivirira kuyerera kwemvura.
5. Usashandise beaker kubata makemikari kwenguva yakareba kudzivirira guruva kuti riwire mukati, kana kubuda kwemvura.
6. Usashandise beaker kuyera mvura.
Pashure: Lab Glassware Yemvura Kugadziriswa Kwemidziyo Zvishandiso Chemical Laboratory
Zvadaro: Kubikira girazi guchu rine rakatenderera kana rakapetwa chimiro Chemical murabhoritari Yakareba pfupi mutsipa 200ml 100ml 50ml
Kubikira girazi guchu nedenderedzwa kana yakati sandara chimiro Ch ...
Laboratory midziyo yakakwirira tembiricha nemishonga ...
Yepasi pevhu muromo Flask pear chimiro
Lab yakajeka Kufiriza Flask nerutivi tubulature
Yepasi Pevhu Muromo Chinwi Oblique chimiro, ine ...